လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်…. (Gazette Leaks ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်…. (Gazette Leaks )
လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်…. (Gazette Leaks )
Posted by ဦးဦးပါေလရာ on Apr 12, 2013 in Creative Writing, Letter to The Editor, Members | 67 comments
ဆိုတော့ကာ…. ဒီအချိန်မျိုးဆိုမှဖြင့် ကျုပ်လို အဘိုးကြီးများ တယ်…အထီးကျန်သကိုး……..
သင်္ကြန်တွင်းအတွက် စားရေးသောက်ရေး ပြင်သူကပြင်…
အခြောက်အခြမ်း မုန့်ပဲစားဖွယ် ရှာဝယ်သူကဝယ်….
လည်ဖို့ပတ်ဖို့ ချိန်းကြ… ဆိုကြ… ဝယ်ကြ… ခြမ်းကြ….
အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ရေနွေးတစ်အိုးနဲ့ ချောင်ထိုးခံရတာကတော့ လူကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူကြီးတွေကလဲ အားကျမခံ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားဖို့ ဥပုသ်စောင့်ဖို့ ရိပ်သာဝင်ဖို့ လှူရေးတန်းရေးလုပ်ဖို့
စသည်…. စသည်….ဖြင့် ကိုယ့်ထွက်ပေါက် ကိုယ်ရှာကြရတာပေါ့……။
ခက်တာက ကျုပ်ကလဲ ကြီးမလိမ္မာ ဆိုတော့..
ဂဇက်ရွာထဲ သင်္ကြန်တွင်းမို့ လူအဝင်နည်းနေတုန်း
ကြားမိသမျှသတင်းပလင်း အတင်းအဖျင်းလေးတွေ … တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်လက်တို့ပြောပြမယ်…။
(ကျုပ် အကုန်ပြောပြီးသား…. )
ကျုပ်တစ်ခုကြားတာက ကျုပ်တို့ရွာထဲက ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဆိုတာကြီး..
သူတို့ကိုယ်သူတို့ခေါ်တာတော့….. ဘာတဲ့… မန်ဂဇက်ချစ်သူများ… ဆိုလား…
တော်တော်ချစ်တတ်ကြပုံရတဲ့လူတွေပါဗျာ… တကယ်… တကယ်….
အဲဒါ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ စာမူရွေးချယ်တဲ့ပုံစံတွေဘာတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမလို့…… ဆိုပဲ၊
တစ်ယောက်ကစပြောလိုက် ကျန်သူတွေက တစ်ယောက်တစ်မျိုးပြောလိုက်နဲ့..
ခဏနေတော့ ဟိုလိုသည်လိုဖြစ်ပြီး ပျက်ပျက်သွားတာ…။
ပျက်မှာပေါ့… အစက စာမူဖတ်ရွေးတဲ့ကိစ္စဆိုတာ အဖွဲ့ဝင်တွေက တစ်လအတွင်းဖတ်မိသမျှစာတွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ တေးမှတ်ထား- လကုန်တော့ အတွင်းရေးမှုးဆီ စာရင်းပို့၊ အတွင်းရေးမှုးကစာရင်းချုပ်ပြီးရင် အလှည့်ကျသူက ပိုစ့်တင်ကြေငြာ-
အဲသလိုသွားလာတာ ကိုးလရှိပြီ။ ဒီလောက်လွယ်အောင်လုပ်ထားတာတောင်ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီး ဒါ့ထက်ပိုလုပ်ရမယ့် ပုံစံအသစ်လေးတွေစဉ်းစားတိုင်း ဦးဦးပလာတာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးက ဝင်ဝင်ပြီး ကန့်လန့်ကန့်လန့်လုပ်နေတာ…။
နောက်လုပ်မယ့် စာမူရွေးချယ်ရေးပုံစံသစ်ကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးနှစ်ဦးက တိုင်ပင်ရေးဆွဲပြီး ရွာထဲမှာချပြမယ်တဲ့….။
အရင် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေ လစဉ်ကြေးလေးစုပြီး ဆုပေးဘို့စီစဉ်တာကိုလဲ ပယ်ဖျက်ပြီး-
စာမူရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စက သပ်သပ် – စာမူရွေးတဲ့သူတွေလုပ် ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေဝိုင်းလုပ်
ရွာ့ကိစ္စအတွက် ဆုပေးပွဲ တွေ့ဆုံပွဲအတွက် အလှူငွေထည့်ဝင်တဲ့ကိစ္စက သပ်သပ်-
ပင်တိုင်အလှူရှင်တွေနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ကိုယ်နိုင်သလောက်စုပေါင်းထည့်ဝင်ကြ ……ဆိုပြီး
စာမူဖတ်လဲရွေးရသေး ပိုက်ဆံလဲထည့်ရသေး ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ…။
အဲသည်မှာတင် ဦးဦးပလာတာတစ်ယောက် ခေါင်းခြောက်ရတော့တာဗျို့…
သူများစာကိုလဲ ဖတ်ရွေးပြီး နှမ်းဖြူးထုံးသုတ်ချင်သေးပေမယ့် အရင်လို အချောင်ခိုလို့ ရတော့မယ့်ပုံမရှိ-
အလှူရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လိုအပ်ရာရာလေးတွေပါဝင်ပံ့ပိုးပြီး နေပါတော့မယ်ဆိုရအောင်လဲ သူကိုယ်တိုင်က ဆယ့်နှစ်ရာသီဘိုင်ကျနေကျ-
မထူးပါဘူး…. ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေ အနားယူသလို နှစ်သီးစားပင်စင်နဲ့နားပြီး အကြံပေးအဖြစ်နဲ့ပြန်ဝင်ဦးမှဆိုပဲ….
နောက်တစ်ခုကတော့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ……..
ဘယ်ဥပဒေရှိရမလဲဗျာ…. ခင်ဗျားတို့ရွာသူကြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဂဇက်ဥပဒေပေါ့….
တကယ်တမ်းကျတော့ သူကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လိုဖြစ်နေပြီ …..
အမှု့ဖြစ်မှန်းသိလဲ မတိုင်မချင်း ဘာမှသိပ်လုပ်တာမဟုတ်။
သူ့ ရွာစောင့်တပ်ဖွဲ့ကလဲ သူလုပ်မှာလား ငါလုပ်မှာလား နဲ့ လွတ်သွားတာတွေကများနေပြီ။
ရွာစည်းရိုး ခွေးတိုးတာလောက်ကတော့ ရှိတာပေါ့…
ဒါပေသိ ဟိုးတစ်လောက ရိုးချောင်းတစ်လျှောက် ရေမြှုပ်မိုင်းကြီးမျောလာပါရောကလား….
အဲဒါက ပြီးသွားပေမယ့် နောင်ကိုလဲ ထောင်မိုင်း၊ တိုက်မိုင်း၊ နင်းမိုင်း၊ ချိန်ကိုက်မိုင်းတွေ ရောက်လာနိုင်သမို့
နောက်နောင်ကို ဌာနဆိုင်ရာတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေက တာဝန်ရှိသူတွေကို နာမည်ရာထူးနဲ့တပ်အပ်စွပ်စွဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သက်တိုက်ခိုက်တဲ့စာတွေကို လက်မခံဖို့ ဖျက်ပစ်ဖို့ ရွာသူကြီးကို တိုက်တွန်းကြသတဲ့….
အဲဒီတိုက်တွန်းချက်ကို ရွာသူကြီးကလဲ လက်ခံသတဲ့….
အဲ…. အဲဒါမှ သတင်း …….
ရော့ .. ရော့.. ရေကလေးတစ်ငုံလောက်သောက်လိုက်
အံ့အားသင့်လွန်ပြီး မင်တက်မိနေတာလေး ပြေသွားအောင်…။
အဲဒါ နောင်ကို ရွာ့လုံခြုံရေး စိတ်အေးကြပေတော့
မသကာ ထပ်ဖြစ်တော့လဲ ပစ်မိန့်မပေးရသေးလို့…လို့ သဘောထားကြတာပေါ့ဗျာ……။
ကျုပ်တို့ရွာသူကြီးက ကျုပ်တို့ရွာကြီးကို ပြင်ဆောက်ချင်နေသတဲ့….
သူ့ရွာက အင်းဝခေတ်က ပရပိုက်ကြီးနဲ့တူနေတာကိုး….။
အဲဒါ ဘယ်တော့ဆောက်မယ်မဆောက်မယ်ဆိုတာ အသာထားလို့
လောလောဆယ်တော့ လူဦးရေများလာလို့ ဝင်ရထွက်ရ ကျပ်တည်းကြန့်ကြာလာတာကိုဖြေရှင်းဖို့
ဆာဗာသို့မဟုတ် ရွာ့မြေနေရာတိုးချဲ့ဖို့ကလဲ အရေးကြီးနေပြန်ရော…..။
အဲဒီအတွက် ရော နောင်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေအတွက်ရောစဉ်းစားပြီး
စိတ်လဲပါ လက်လဲပါ နိုင်တဲ့ရွာသားတွေထဲက
နည်းပညာအရဖြစ်စေ ငွေကြေးအရဖြစ်စေ ရွာ့ကောင်းကျိုးအတွက် တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ကူညီကြမယ်ဆိုရင်
လက်ခံပေးဖို့ ရွာ့သူကြီးကို ရွာ့လူကြီးတွေက ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းတာကိုလဲ
သူကြီးခမျာ အများသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ လက်ခံလိုက်ရပါသတဲ့
ကျုပ်တို့ ကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကြပါစို့ဗျာတို့……
ပြီးမှ စကား ဆက်ကြသေးတာပေါ့…………….။ ။
လူတောမတိုးတဲ့ ကျုပ်က အဖော်လုပ်ပါသဗျားးး
ကျုပ်က ရေနွေးကြမ်းလေးအပြင် …
ကွမ်းနဲ့ ဆေးလိပ်လေးပါ ဘေးနား ချထားမှ အကြာကြီးနေပေးမှာ …
မန်းဂဇက်ချစ်သူများ ဆုတော့ဖြင့် …
အသွင်တစ်မျိုးလေးနဲ့ ဆန်းသစ်လာဦးမယ်ထင့် …
ဒီရွာကြီးလည်း အဝင်အထွက် မြန်ဆန် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ချစ်စရာ ပိုကောင်းလာမှာပါ …
သဂျီးက ပွိုင့်တစ်ထောင် နုတ်ဖူးတဲ့လူ ဘူချိဒုန်း သိဘူးး
ဆေးလိပ် သိပ်မသောက်နဲ့ …
ဘာမှန်းညာမှန်း နာမလည်ပေမယ့် ဖတ်လက်စ မထူပါဘူးဆိုပြီး ဖက်နေတာ ပြီးလည်းပြီးရော
ရေနွေအိုး ပွတ်နေပြီဆိုပြီး မအိမလည်လုပ်ထားခဲ့တယ်
တစ်လခန့် ကြာလျှင် နားလည်သွားပါလိ်မ့်မယ် ။
ရွာအကြောင်း ဖြတ်လမ်းက အမြန်ဆုံးသိသွားမှာ
ကိုချိုကြီးရဲ့ ခရီးသွား အတွေ့အကြံပိုစ့်လေးတွေ လုပ်ပါဦး
အတွင်းသတင်းဒွေ အတွင်းသတင်းဒွေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ရှု့ မှတ်သားလေ့လာ သွားပါသည်။ ဗဟုသုတ များလဲရပါသည်။ သဂျီးရွာချဲ့မယ့်ဟာတော့ စိတ်အဝင်စားဆုံးပဲဗျို့။ နေ့ခင်းဆိုရွာထဲဝင်လို့ကိုမရအောင် ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာ။
ရွာဝင်ရခက်တာက ပိုစ့် ရေးအားကိုတော့ သိပ်မထိခိုက်ဘူး မသဲနုအေးရဲ့..။
ရေးချင်တဲ့သူအများစုက အခြားတစ်ခုခုမှာ ရေးထားနှင့်ပြီး ဆိုက်ထဲဝင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ ကူးထည့် ပိုစ့်တင်ကြတာ…
သိပ်အဝင်ခက်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကွန်မင့်ရေးဖို့ခက်လို့ ကြာတော့ ကွန်မင့်ရေးချင်စိတ်တွေ ပျောက်သ၊ွားရော….
မောင်ဂီ တစ်ခါကပြောဘူးသလိုပဲ ဒီရွာရဲ့အားသာချက်က စွဲဆောင်ချက်က ကွန်မင့်ကောင်းတွေပါ….။
အရင်က active member အများစုရဲ့ ကွန်မင့်တွေ အင်မတန်ကောင်းခဲ့ဘူးတယ်။
ဟုတ်တယ်ဦးဦးပါလေရာရေ။ တခါတလေ ဖတ်လို့ရပြီး မန့်မယ်လဲလုပ်ရော log in ဝင်မရတော့ လို့ နောက်ပိုစ့်တွေလဲ ဖတ်မရတော့ပဲပိတ်လိုက်ရတာအခါခါပါ။ တကယ်ကိုပါ ကွန်မင့်တွေ ကဆောင်းပါးတပုဒ်ဖတ်နေရသလိုပါပဲ။ ကျွန်မလဲဒီရွာထဲရောက်လာတာ အဲဒီကွန်မင့်တွေသဘော ကျလို့ပါ။ တကယ်ရွာချဲ့ရင်တော့ ပျော် ပါတယ်။ အလှုငွေကတော့ တဂျီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရှာတော့ လို့။ အာဟိ
ရွာချဲ့တာတော့ ချဲ့ပါပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့ လယ်တွေ စားကျက်မြေတွေလည်း သိမ်းပြီး အကွက်ရိုက်နေဦးမယ်…။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆန်ဒ ပြရမှာပဲနော် ….။
စီမံကိန်းပါကွယ်။ ချိတ်အပူပါနဲ့။ လယ်တကွက်ကို တဂျီးဂ ဒေါ်လှ ၁၀၀၀ဝ ပေးမယ်ကြားဒယ်။ အတွင်းသတင်းဆိုပဲ။
ဈေးတက်အောင်စောင့်ပြီးမှ ဆန္ဒပြ လျော်ကြေးတောင်းကြတာပေါ့
ဦးဦးပလာတာရေ.. တားလည်း ဘကြိုင်.. ဘိုင်ကျပြီး
ပြနိုင်.. ပြန်မနိုင်လို့.. ဘဝတူတွေ ဖြစ်သွားပီမို့..
ဦးဦးပလာတာ ဆက်ရေးမယ်.. အတွင်းသတင်းလေးတွေမှာ
စဉ်းစားမိတယ်.. အသက်ကြီးလာလို့ အဘိုးလေးလောက်ဖြစ်ရင်
မပျင်းရအောင်.. မိန်းမ လေးငါးယောက်လောက်..
ကြားဖူးတာတော့ မြန်မာငါးယောက်ရှိရင် သင်္ကြန်ကျတယ်တဲ့….
နိုင်ငံအပြင်ရောက်နေသူတွေကို သတိရတိုင်း စိတ်ပူမိတယ်….။
ဦးဦးပလာတာရေ… စိတ်ပူပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ည..
သင်္ကြန်မကျနိုင်ပါဘူးခင်ည.. မြန်မာ နည်းသလို
ရောက်နေတယ် ရေနယ်နိမိတ်က ဆော်ဒီပိုင်မို့..
ဘီယာ အရက်.. အကုန်ဖွက်ထားရပါတယ်..။
နှလုံးသားတွေ အလေ့ထုံနေပီမို့.. ထူးထူးခြားခြားတော့
ဦးဦးပလာတာက ရွာရဲ့ နာယကအဖွဲ့ဝင်မို့ မေးရဦးမယ်..
ရွာသားဖြစ်တာလဲ ကြာခဲ့ပြီး အချိန်ရသလောက် စာရေးတဲ့
ကိုရင် အခုထိ Rank မှာ ဘရောင်း အဆင့်က မတက်သေးတာ
ဘာလိုအပ်ချက်တွေများရှိနေသေးလို့လဲဗျ..။ (အဆင့်သတ်မှတ်ပုံလေး တချက်)
ကိုယ်က စာရေးတာ ဘာတာ ညာတာ မတော်ပေမဲ့..
ပိုက်ပိုက် (Points) နဲ့ ဆိုင်ဒယ် ..
တိုးချင်ရင် များများရေး များများပေး (မန့်)
တစ်ချို့လူတွေကျတော့ ယောင်မှားပြီး အချိန်တိုတိုနဲ့အဆင့်တွေတိုးပုံရတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲသည်အဆင့်တွေကလဲ ဘာမှလဲ သိပ်ထူးပုံမရပါဘူး..။
ကိုရင်က ဘရွန့်ဇ်ဆိုရင်တော့ ကျုပ်နဲ့အတူတူပါပဲ။
ကိုကြောင်ကြီးကတော့ အလူမီနီယမ်ဆိုလား ယူရေနီယမ်ဆိုလား…
ဒါက.. ငွေကြေး(ပွိုင့်)ဘယ်လောက်ရှိနေသလည်းအပေါ်.. အဆင့်ခွဲထားတာပါ..
မတိပါဘူး.. ဦးဦးပလာတာနဲ့ သဂျီးခင်ညာ..
တချို့ပို့စ်တွေက အဝင်ရခက်သလို ဖြစ်နေလို့..
အဲ့လာကြီးနဲ့များ ဆိုင်မလားလို့.. Rank တက်ရင်
ငွေ၊ရွှေ၊ ပလက်တီနွန် ဖြစ်ဖို့တော့ ကိုရင့်
သားစဉ်မြေးဆက် တီတွတ်ကျွတ် အထိ အမှာစာရေးပြီး..
ရွာသူားတွေ.. ရွာလူကြီးတွေနဲ့.. တိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြ…
.. . ရွာနောင်ရေးအတွက်စဉ်းစားရေးကြဖို့..။ :harr:
ပထမဦးဆုံး လူကြီးကို “ဟာ”ကနဲဖြစ်အောင်လုပ်မိလို့…ခွင့်လွှတ်ပါလို့… အား ဟိ…
ရွာချဲ့ဖို့ကတော့ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း အသင့်ပါ…
ဆိုင်းမပါ ဗုံမဆင့် ဆိုတာ အဲဒါလေ..
ချောပါသွားလို့ ရွာဘာဖြစ်နေမှန်း မသိတော့ ဦးဦးပါ ပြောတဲ့ gazette leaks ဘဲ သင်္ကြန်တွင်း ကောင်မလေးတွေ ရှုရင်း နားထောင်တော့မယ်..
ရွာထဲ ပိုစ့်နည်းနေလို့ CJ ကြီးကထူးဆန်းရဲ့ ပိုစ့်တွေ မျှော်နေကြောင်းပါဗျာ..
ပြေးစရာမချိပါလား ဦးဦးရယ် အပြင်ထွက်ရင် ပူလွန်းလို့ အိမ်တွင်းအောင်ပြီး ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ ကလေးကို လာညှော်တဲ့ အိမ်က အဒေါ်အပိုရီးတွေလိုပဲ အဟင့်
သင်္ကြန်အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ရွာထဲဝင်လာတာ ရွာအရေးလာဆွေးနွေးနေတယ် ….. မြန်မာနယူးရီးယားပီးမှဆို လူပိုဖတ်ကြမှာ ….
ဂယ်ဆိုပေါရလျှင်လေ အဲ့ဖတ်ရွေးဆိုလား အိုက်ဒါရီး စကတည်းက တမီးတို့ပေါတောတောစာဒွေ ချရေးဖို့ လက်တွန့်သွားတာ ခိခိ အမှန်ကယ် အကြိတ်နယ် ရေးနေတဲ့လူဒွေကြားထဲ အနှစ်မရှိပညာမရတဲ့ စာမျိုး ချပြရမှာ အရမ်းအားနာမိသလိုလေးဖြစ်မိဒယ် အိုက်ဒါပါပဲ ….. (ဆုပေးတဲ့နာရီရီးမရလို့ အိုက်လိုပေါဒယ်ဆိုဒါ အဒူမှမတိစေနဲ့နော် ဟီးးးး )
အိုက်ဒါ ဦးလေးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး သမီးရယ်…ါ
မေလဆန်းလောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြဆိုကြဖို့ကို
ဟို ဖွတ်တီးကတ် အလောသုံးဆယ်လုပ်နေတာနဲ့….
အိတုန်ရဲ့စာတွေက တကယ့်အနှစ်သာရရှိတဲ့စာတွေမှန်း အားလုံးသိပါတယ်..။
သမီး သူများတွေအတွက် စာနာပြောပေးတာ ဦးလေးတို့နားလည်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုဆိုတာကတော့ ဆိုးကျိုးလဲရှိ ကောင်းကျိုးလဲရှိတာပဲပေါ့…။
ကောင်းကျိုးဘက်က အလေးသာတဲ့အခါ ဖြစ်အောင်လုပ်ရသလို
တစ်နေ့ ဆိုးကျိုးများလာရင် အလိုလို ရပ်သွားမှာပါပဲအိတုန်ရေ..
လက်တို့ တာကြည့်တို့ နော် ငှက်ကထကြီး။
ခါးသွားတို့ မိရင် ယားတတ်သူတွေ ရှိတယ်။
ဟိုတရားစခန်းက သူတွေကိုလဲ သတိရပါ့။
သူတို့ကတော့ စိတ်ငြိမ် ပြီး အေးချမ်းနေလောက်ပြီ။
ကွန်မင့်စုံမှ တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့် မခင်လတ်ရေ
အဲဒီကျမှ ပြောစရာတွေ ရှိလာမှာ..။
ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုက် ဂန့်သွားပြီလို့ တလောက ပြောသံကြားတယ်…. အဲဒါ ဂေဇက်ကြီး လန်းချင်ရင်…… လက်တို့ပါတယ်…. အန်တယ်ဂျီး ဦးပါလေရာ ခင်ဗျား…
စုန်း ဘု ရင် says:
အဲ့ကိစ္စက ဦးကြောင်ကြီး လက်ရှောင်ပြီး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းသတင်းအရ သိရကြောင်းးးးးးးးးးးးးး
ရွာအဝင် မော်ဒယ်မလေးများက အပြုံးနဲ့ဆီးကြိုနုတ်ခွန်းဆက်မယ်ဆိုရင် ရွာထဲလူပိုစည်မည်ထင်ကြောင်း
ကျုပ်က ခုမှ ဝင်လာတာပါ
ပလက်မြေလေး တစ်ကွက်လောက် ဝင်ဦးပါရစေ
ရွာထဲကို အဝင်ခက်လာတာတော့ ပြောမနေနဲ့ သုံးရက်လုံး.. လည်နေတာ..
ဒီနေ့ setting က proxy လေး ချိန်းပြီး ဝင်တော့မှ ရတော့တယ်..
နှစ်သစ်မှာ အစီအစဉ်သစ်တွေနဲ့ ချီတက်မပေါ့
အင်း…………………ဒါကတော့ တာဝန်ရှိသူများ ဆုံးဖြတ်ကြပါလေ
ရွာကို ဒီနှစ်မှာ ပုံစံပြောင်းမယ်လို့တော့ သဂျီး ပြောနေတာပဲ
ရွာရဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းတာကတော့ ပြောင်းပေါ့
သို့သော် ရှုပ်ပွနေရင်တော့ လူတွေ မျက်စိလည်ကုန်မနော……………………….. :hee:
တို ့များတော့… ဒါပဲ.ပြောတတ်တယ် ။
ရေးပုံစနစ် ပြောင်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားမယ်ဗျာ။
အားကျမခံ ပြောင်းမလို့ လေ။
CHANGE ပို့စ်က ဒီလဖတ်ရွေးဆု ရတယ်..
ခု ဖတ်ရွေးက CHANGE လုပ်တော့မယ်…
ကျုပ်တတ်စွမ်းသရွေ့ ရွာကောင်းကျိုအတွက်ဆိုရင် ကူညီပါမယ်………….
လက်တို ့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ကြပါ
ရန်ကုန်မှာ အထည်စပေါ် ဘုရားစေတီပုံ ရိုက်တဲ့ ကိစ္စ
လက်တို ့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ကြစို ့
အားတုန်း ကွန်မင့်ကလေးတွေများ ပြန်ရေးမလားလို့ …
ဒါမှ ကွန်မင့်မြန်မြန်ရောက်ချင်ရင် စာရေးပြီးစာတိုက်ကပို့လို့ရအောင် …
ဦးပါပြောမှပဲ အကြံကောင်းတချက် လက်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။
နှစ်သီးစားဆိုလား ဘာဆိုလား။ :harr:
အမှန်ကတော့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို စပြီး လုပ်ဖြစ်ကတည်းက အစပျိုးပေးတဲ့သဘောပါပဲ။
အများကြိုက်တာကို ရွေးပြီးဆုပေးရင် ရေးအားတွေပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပါ။
ဘိုးဘွားရိပ်သာမသွားမီ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေး လုပ်ပေးခဲ့ချင်တဲ့သဘောပါပဲ။
အခုတော့လည်း အသံမျိုးစုံတွေကြားထဲကမှ ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံတယ်ပဲ ပြောရမယ်။
ပုခုံးပြောင်းယူချင်တဲ့/ယူနိုင်တဲ့ လူငယ်လေးတွေပေါ်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ၊
FORWARD MG ! :hee:
သင်္ကြန်ရက် ခရီးထွက်နေလို့ ဒီနေ့မှပဲ ဖတ်မိပါတယ် ..
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် ကြိုဆိုပါတယ် …
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်အားဖြည့်သွားမှာပါ …
လောလောဆယ်မှာတော့ လူကြီးလဲမဟုတ် လူငယ်လဲမဟုတ်တဲ့ အလယ်အလတ်အခြေအနေမှာ တစ်ခါတစ်လေ လစ်လပ်မှုတွေရှိနေသေးတာကို အားမရဖြစ်မိနေပေမယ့် …
ရှေ့ဆက်ပြီး ဆက်ကြိုးစားအုန်းမှာပါလို့ …
အမှန်အတိုင်းပြောရင် တရားစခန်းကနေ ရွာထဲဝင်ချောင်းသေးတယ်… gazette leaks ဆိုပြီး အားရပါးရဖွင့်လိုက်တာ contact us နဲ့ မိလို့.. လော့အင်လည်း မဝင်နိုင်တာနဲ့ပဲ မထွက်ချင်ထွက်ချင်နဲ့ ပြန်ထွက်ခဲ့ရတာ.. ခုတော့ ကျွန်မသိဘီ…
မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သမီးလည်း ဖတ်ရွေးအတွက် သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါကြောင်း…
ရွာဝင်ခက်တာက တကယ့်ကို မန့်ချင်စိတ်ကျစေတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဦးပါဆီကို ကျမ ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေနွေးအိုးထဲ လက်ဖက်ခြောက် နည်းနည်းလောက် ခပ်ပါရစေ။
ငွေတတ်နိုင်တဲ့ လူကြီးပိုင်းက အလှူရှင်တွေတိုးတက်ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။
(အဘဆွေနဲ့ အဘဖေါကတော့ ပါပြီးသား၊ဦးကျောက်၊ကိုဆာမိ၊ကိုနွေဦး၊ဂရုဒ တို့လို လူလတ်ပိုင်းတွေလည်း သဒ္ဓါတတ်အားနည်းများမဆို ပါဝင်ကြပါအုံးလို့ အလှူခံဖလားကြီး ဂေါက်ဂေါက်ဂေါက် ခေါက်လိုက်ပါတယ်)
ကျမတို့ စိတ်ကူးယဉ်မှာ လစဉ်ဆုရပို့စ်တွေကို ပုံနှိပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ ရွာသူားတွေကို အရင်းတိုင်းပြန်ဖြန့်ပေးဖို့ အိပ်မက်လည်းပါပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဆိုင်ရာပို့စ်မှာ မန့်ကြတာတွေကိုပါ အဘဖေါရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ကို သိကြားက pdf file လုပ်ပေးတာမျိုးနဲ့ ထုတ်ဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးတွက် လူငယ်ပိုင်းကလည်း အကြံဉာဏ်နဲ့ လုပ်အားပေးကြစေချင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တစ်လက်ဝိုင်းဝန်းပြီး ကိုယ့်ရွာအကျိုးတွက် ကိုယ်နိုင်ရာဝန်ထမ်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကျကျ ရွာလေး ထူထောင်တာမှ ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးပါ။
မော့တွေရဲ့ တာဝန်ထဲမှာ လူမျိုးရေးဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်စေမယ့် အရေးအသားတွေ ဖျက်ပေးဖို့အဓိကပါ။
ဒါ့အပြင် သဂျီးမအားလပ်လို့ လွတ်သွားတဲ့ ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာကောင်းလေးတွေ ရွာသူားများ ဖတ်မိလေအောင် သဂျီးကိုယ်စား ကြော်ငြာသင်ပုန်းမှာ စတစ် လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
သဂျီးရဲ့ ရွာပြင်ဖို့ အတွက်ကလည်း ဒေါ်လှနဲ့မှ၊ရာချီလှူမှလို့ သဘောမထားပဲ ရွာပေါ်စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း ဝိုင်းဝန်းစေချင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ ရွာရဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်အလှူက ရွာတိုးချဲ့ရေးစီမံကိန်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သဂျီးထောင်ထားပေမယ့် ဒီရွာကို ရွာသူားတွေပိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
” ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာကောင်းလေးတွေ ရွာသူားများ ဖတ်မိလေအောင်
သဂျီးကိုယ်စား ကြော်ငြာသင်ပုန်းမှာ စတစ် လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ် ”
Sticky လုပ်ခွင့်က Mod တွေဆီမှာ နဂိုထဲက ရှိနေပြီးသားပါ ( လို့ထင်ပါတယ် ) ။
ဘက်လိုက် ရွေးချယ်ပြီး Sticky လုပ်တယ်လို့ အထင်ခံရမှာကို ရှက်ကြလို့ ၊
Mod တွေက စာကောင်းလေးတွေ ကို Sticky မလုပ်တာပါ ( လို့ထင်ပါတယ် ) ။
နောက်ပြီး ၊ Sticky ကိစ္စက လူမျိုးရေးဘာသာရေး ပဋိပက္ခလို Urgent မဟုတ်လေတော့ ၊
သူကြီး အေးအေး ဆေးဆေး ရွေးပါစေ ဆိုပြီး Mod တွေ မထိကြတာ ( လို့ထင်ပါတယ် ) ။
ဟိုတစ်နေ့က ၊ ဆင်ဖြူရှင်ရဲ့ Post လေးဆို တော်တော်လေး ပြည့်စုံအောင် ၊
စုစည်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ ၊ တကဲ့ စာကောင်းလေး ဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ် ။
သူကြီးက အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးတွေ စတစ်လုပ်ပေးဖို့ မော့တွေကိုတောင်းဆိုချင်တာပါ။
ကိုယ့်ပို့စ်ကိုကိုယ် စတစ်မလုပ်ရင် ပြီးတာပဲ။
ဒီပို့စ်လေး စတစ်လုပ်ပေးပါလို့ ဖတ်မိတဲ့ ရွာသူားတွေက ကွန်မန့်နဲ့ တောင်းဆိုတာမျိုး လုပ်ပေးရင် ဘက်လိုက်တယ်လို့ ထင်ခံရမှာ စိုးစရာမလိုလောက်ပါဘူး။
စတစ်လုပ်ခွင့်မောဒ့်တွေမှာရှိပြီးသားပါ..။ နည်းပညာပိုင်းအရပြောရရင်.. စတစ်ကီပို့စ်က Front page မျက်နှာစာမှာအမြဲကပ်ပါနေတာမို့.. များရင်များသလောက်.. ပထမဆုံးဝင်လာတဲ့သူတွေ.. အဝင်ခက်စေပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့်လည်း.. မော့ဒ်တွေ.. တတ်နိုင်သလောက် လက်ရှောင်နေတာ .တချက်..ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
ပုံနှိပ်စာအုပ်ကတော့. .မြန်မာပြည်ပုံနှိပ်ဥပဒေတွေနဲ့လွတ်ပါတယ်ဆို.. ထုတ်ရင်ကောင်းပါတယ်..။(ရှိသေးလားမသိ)
.. ဒါပေမယ့် ပီဒီအက်ဖ်က.. တကမ္ဘာလုံးလှမ်းဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေး.. အားသာချက်လည်းရှိပါတယ်..။
.. ဖေ့စ်ဘုတ်ကစာကောင်းတွေ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကူးယူလာပြီး.. ထည့်တဲ့ကဏ္ဍလေးပါရင်ကောင်းမယ်..။ ပီဒီအက်ဖ်ဖြန့်ရင်.. တလက်စထဲ စာဝါသနာအိုးတွေဖတ်လို့ရသွားတာပေါ့..
ကျနော် ကိုယ်တိုင်က ပေါ့တီးပေါ့ပျက်မို့ ကျန်တဲ့ ခေါင်းလေး၊ ခေါင်းခဲရမဲ့ ကိစ္စတွေတော့ ဘာ အကြံမှ မပေးနိုင်ဘူးထင်ပါ့။
အဲဒီတော့ အာတီဒုံ ပြောတဲ့…….
ဂေါက်ဂေါက်ဂေါက် ခေါက်နေတဲ့ အလှူခံပုံးကြီးကို ပဲ ကူညီမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
မတည်ငွေ ထဲ လှူရမလား၊
လစဉ်ငွေထဲ လှူရမလား ပဲ ကျနော့ကို အသိပေးပါ။
လှူပြီးငွေ ရွာကောင်းစားရေး ဘယ်နားသုံးသုံးပါ။
ငိုချင်ရက် လက်တို့ သလို ဖြစ်နေပြီ
ငွေအားနဲ့ ကူဖို့ကတော့ ဝေးနေသေးတာကြောင့်
လူအားနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးပါမယ်ဗျာ
ဘယ်နေရာကနေ တတ်နိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်နေပါတယ်
တကယ်လို့ pdf ပုံစံ ထုတ်ဝေချင်ရင်တော့ဖြင့်
တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ဝမ်းသာအားရ ကူညီမယ်လို့ ပြောချင်မိပါသဗျို့
ကူမယ်ဆိုတဲ့ မယ်ဆွိနဲ့ သိကြားကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
မယ်ဆွိလေးရေ၊ ဖတ်ရွေးတွက်က ၆လ တစ်ခါ ပွဲလုပ်မှာဆိုတော့ အနားနီးမှ ပေါင်းပြီး တတ်နိုင်သ၍ အလှူခံပုံးထဲ ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
တစ်ယောက်ထည့်ဝင်ငွေ သိပ်မများပဲ အလှူရှင်များများ ပါတီဆီပိတ် တာဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
လိုတာကို ထုံးစံအတိုင်း အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ စိုက်မှာပေါ့။
သိကြားက pdf လုပ်ပေးဖို့ ကူမယ်ဆိုတော့ စာအုပ်ထုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေ လက်ထောင်ပေးကြပါအုံး။
(တကယ်တော ့……ဒီလမှကူဖတ်ပေးမလို့ခုတော ့…..
ပုံစံပြောင်းမယ် ဆိုရင် :harr: )
ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမှာလဲ လို့သိချင်မကြောင်းပါ
ဒါပေသိ..အလှူငွေတော့ တတ်နိုင်စွမ်းသလောက်လှူပါ့မယ်လို့.. :hee:
ကျနော့သဘောကလည်းထပ်တူပါပဲ…အခု ချိန်းကြမဲ့ ဖတ်ရွေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်တွေကို
ကျုပ်တို့လို လူဂျီးတွေကမဆွဲပဲ လူငယ်ခြေသွက်တွေ ဝိုုင်းရေးကြတာကောင်းပါတယ်…
ကျုပ်တို့ အဖိုးဂျီး အမယ်ဂျီးတွေကတော့ ဦးပါတည်တဲ့ လဘက်ရည်ကြမ်းလေးသောက်
ပြီး ဘေးထိုင် ဘုပြောနေရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါဂျောင်းးးးးး
ကကြီးမိုက် ကို ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါတယ်။
ရွာအလယ်က ကွပ်ပြစ်မှာ ထိုင်ပြီး ဘုတော ပေးပါ့မယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုခင်လတ် သံခမေါက်ဆောင်းထားရလိမ့်မယ်ဗျို့..
ဒါနဲ့ နေကြပါအုံးဗျ…ဒီပို့စ် အပေါ်တက်ကပ်နေတာ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကတည်းကပါ…
တွေ့လား..ဦးပါ မိဂီလုပ်ပုံ လုပ်ပုံ
ခုထိ “ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘု” လုပ်နေတုန်း..
“ဖွတ်တီးကက်” ခေါ် “ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ”
လောလောဆယ်တော့.. ပါဖောမန့်တက်အောင်ဆိုပြီး.. အပ်လိုက်လို့.. ၇၅ဒေါ်လှပလုံသွားတာ.. နည်းနည်းလေးများ.. မမြန်လာဘူးလားဟင်… :buu:
ဟိုလိုရွေးပါလား.. ဒီလိုရွေးပါလား.. အနော်လဲရွေးတတ်ဘူး ဟိ
ဒီတခါရွာထဲကို ရေမြုပ်မိုင်းကြီးဝင်လာရင် အနော့ကို သတင်း အရင် ပေးပါဗို့ျ မှတ်တမ်းလေးတင်ထားချင်လို့
ဒါမှ တရားခံကို မှတ်တမ်းထဲမှာ ပြန်ရှာလို့ရမှာပေါ့
ဘာမှမဟုတ်ဘူး လူစုံတက်စုံ ပြောနေကြလို့ ဝင်ပါလိုက်သည်..
ရေနွေးဆူနေရင် လက်ဖက်ခြောက် မခက်နဲ့ဦး အနော်က နှပ်ကော်ဖီကြိုက်လို့ ကော်ဖီလေးအရင်ဖျော်ပါရစေဦး
သူကြီးဆာဗာမချဲ့လို့ ရွာထဲဝင်ရခက်တာကိုး…..ကျွန်တော်မောင်တောသားက ရွာသား အသစ်မို့ ခက်တယ်မှတ်တာ….ပိန်းပါ့ ငါ့နှယ့်…..အဟီး
ဒါမှပဲ ရွာလည်း ပြန်လည်စည်ကားလာမယ်။
ကောမန့်တွေ ဖတ်လိုက်ရတာ တော်တော်တောင်မောသွားတယ်